अरुको ज्यान बचाउदा बचाउदै आफ्नै ज्यान बचेन ! - Sidha News
अरुको ज्यान बचाउदा बचाउदै आफ्नै ज्यान बचेन !
सिरहामा को’रोनाका कारण एक जना चिकित्सकको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमालहान नगरपालिका वडा-६ घर भएका अ’र्थोपे’डिक विशेषज्ञ डा. मुकेश चौधरी रहेका छन् । ९ दिनदेखि होम आ’इसोलेसनमा बस्दै आएकाउनी सोमबार साँझ उपचारका लागि विराटनगरस्थित वि’राट नर्सिंङ लगेको केही बेरमै मृ’त्यु भएको बताइएको छ ।
३५ वर्षीय डा. चौधरी लहानमा डा’इनो’ष्टिक सेन्टर सञ्‍चालन गर्दै आएको लहान नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामसुन्दर यादवले बताए ।उनी सोही सेन्टरमा सेवा दिने क्रममा सं’क्रमित भएका थिए ।त्यस्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का वडा सदस्य केशरलाल चौधरीको नि’धन भएको छ ।
उनको आईतबार राति १२ बजे नि’धन भएको हो । उनी ज’ण्डिस रो’गबाट ग्र’सित थिए । यस अघि सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बर न्यौपानेको मृ’त्यु भएको थियो । उनको स्वा’सप्र’श्वास र द’मका कारण मृ’त्यु भएको हो ।वडा सदस्य चौधरीको नि’धनप्रति तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दुः’ख ब्यक्त गरेको छ । प्रमुख घनश्याम पाण्डेले शो’क बक्तव्य जारी गरि परिवारजनमा स’मवेदना प्र’कट गरेका छन ।
त्यस्तै एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी स’चिवालय सदस्य सतमान पुनमगरको को’रोना संक्रमणबाट नि’धन भएको छ । बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत पु’थाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१० नि’वासी ६० वर्षीय पुनको मंगलबार बिहान मृ’त्यु भएको एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचिव खेममान खड्काले जानकारी दिए ।
उनलाई केही दिनअघि को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । श्वा’सप्र’श्वासमा स’मस्या बढेपछि वैशाख ३१ गते जिल्ला अस्पताल रुकुम पश्चिम ल्याइएकोमा अवस्था ज’टिल भएको भन्दै त्यहाँबाट कोहलपुर रे’फर गरिएको थियो । उनलाई जेठ १ गते हेलिकप्टरबाट कोहलपुर लगिएको थियो ।